गाडीमा द्वैध नीति | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय गाडीमा द्वैध नीति
on: २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०६:५१ सम्पादकीय
गाडीमा द्वैध नीति
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऋणमा गाडी नकिन्न अर्ती दिएका छन् । कमाएर मात्रै गाडी किन्नुपर्ने उनको तर्क छ । राजधानीमा जारी गाडी प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उनले दिएको मन्तव्य विरोधाभासपूर्ण छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो समय गाडीको विक्रीको प्रवर्द्धनका लागि भएको प्रदर्शनीको उद्घाटनका लागि दिए । अर्थात् यसको अप्रत्यक्ष विज्ञापनमा उनी सहयोगी बने । गाडी विक्रीको प्रवर्द्धन गर्नु थिएन भने उनले त्यसको उद्घाटन किन गरे त ? अर्थमन्त्री मात्र होइन, नेपाल सरकारको नीति पनि यस्तै छ । सरकारले अहिलेसम्म गाडी विलासिताको वस्तु हो कि उत्पादन बढाउन सहयोगी हो भन्ने छुट्याउन सकेको देखिन्न । त्यसैले नेपालले गाडीमा लिने भन्सार संसारमै सबैभन्दा चर्को छ ।
गाडीका कारण व्यापारघाटा बढी भएको भन्ने सरकारी विश्लेषण पाइन्छ । त्यही भएर चर्को भन्सार लगाउनुपरेको तर्क उसको छ । यो तर्क साँचो हो भने यातायातलाई कम खर्चिलो बनाउने गरी भौतिक पूर्वाधार किन बनाइँदैन ?
राजस्वमा गाडी विक्रीको ठूलो अंश छ । त्यसैले सरकार गाडी विक्री कम हुँदा राजस्वमा असर परेकाले यसको विक्री बढाउन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गर्छ । तर, विलासी वस्तुभन्दै २५० प्रतिशतसम्म भन्सार लिन्छ । अझ, त्यसमा वार्षिक कर बेग्लै लिन्छ, प्रदूषण कर पनि लिन्छ । यसरी यातायात प्रणालीलाई विश्वकै महँगो बनाउने काम सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक यातायातका लागि आयात गरिने गाडीमा केही छूट दिइए पनि सरकारले गाडीलाई विकासको वाहक हो भन्ने बुझेको देखिन्न ।
गाडीका कारण व्यापारघाटा बढी भएको भन्ने सरकारी विश्लेषण पाइन्छ । त्यही भएर चर्को भन्सार लगाउनुपरेको तर्क उसको छ । यो तर्क साँचो हो भने यातायातलाई कम खर्चिलो बनाउने गरी भौतिक पूर्वाधार किन बनाइँदैन ? सार्वजनिक यातायातलाई किन भर पर्दो बनाइँदैन ? सडकमात्रै स्तरीय हुने हो भने तेल र गाडीका पार्टपुर्जाका लागि विदेशिने रकम निकै घट्छ । अझ, सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुने हो भने खाइनखाई सवारीसाधन किन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । यातायात भनेको मोबिलिटी हो । मोबलिटी अर्थतन्त्रको आधार हो । वस्तु, मानिस र विचारलाई चलायमान बनाएर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सकिन्छ । यही भएर मानिसहरूले सवारीसाधन खरीद गर्छन् । केही व्यक्तिका लागि यो विलासी पनि होला तर समग्रमा यो अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित र विकासशील अर्थतन्त्रले कतै पनि सवारीसाधनलाई अनुत्पादक मान्दैन । तर, नेपाल सरकार भने यही तर्कका आधारमा विश्वकै सर्वाधिक भन्सार लगाउँछ । अझ, सवारीसाधनबाट उठेको कर सडकको अवस्था सुधार्न खर्च गरेको पाइन्न । जुन क्षेत्रबाट जेका लागि कर उठाइएको हो त्यसमा किन खर्च गरिँदैन ? निजीक्षेत्रले गाडी एसेम्बल गर्न चासो देखाएको छ । तर, सरकारले उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । यसो भएमा विस्तारै नेपाल पनि गाडी उत्पादन गर्ने राष्ट्र बन्न सक्छ ।
सरकारले यसलाई अनुत्पादक भने पनि गाडीको दुरुपयोग गर्नेको अग्रपङ्क्तिमा सरकार नै छ । महँगा विलासी गाडी सरकारी कर्मचारी नै चढ्छन् । निजी प्रयोजनका लागि र विनप्रयोजन पनि सरकारी गाडी कुदिरहेका देखिन्छन् । कालो धूवाँ फ्याक्नेमा पनि सरकारी गाडी नै अगाडि छन् । तेल आयात घटाउन विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म सरकारसँग तीनचारओटाभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन छैनन् ।
विश्वभरि नै विद्युतीय सवारीका लागि काम हुँदै छ । नेपाल सरकारले पनि यसको प्रवर्द्धनका लागि करमा छूट दिएको छ तर आफैचाहिँ यसको प्रयोग गर्दैन । सरकारी अङ्ग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन बनाउन ढिला गरिरहेको छ । यसरी सरकारले सवारीसाधनसम्बन्धी द्वैध नीति लिएसम्म जनताले महँगो र भद्रगोल यातायात बेहोरिरहनुपर्नेछ ।